Muddo ka dib Khilaaf xoogaystay oo so kala Dhex galay Madaxweyne Gaas & Madaxweyne Ku xigeenka Eng Camey | Garoowe.net	 #ref-menu
Muddo ka dib Khilaaf xoogaystay oo so kala Dhex galay Madaxweyne Gaas & Madaxweyne Ku xigeenka Eng Camey
Waxaa Akhristay 1,380
Iyadoo ay horay u jirtay Khilaafyo kala duwan oo aan xal laga gaarin oo u dhaxeeyey Madaxweynaha Puntland Cabdiwali Gaas iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng Cabdixakiin Camey, Waxaana hada soo cusboonaaday khilaaf cusub oo u dhaxeeya labada masuul ee ugu sareeya Puntland sida aan ku helayno xogo la hubo.
Khilaafka hada taagan ayaa ah mid salka ku hayada Go’aankii laga qaatay Khaliijka iyo Qatar, Shirka Kismaayo iyo eedeymaha loo jeedinayo dowladda federaalka ee la xiriira arrimaha Galmudug.
Xogaha ayaa sheegaya in madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng Camey in dhawaala ah uusan ku qanacsanayn go’aamada uu gaarayo madaxweynaha Puntland uguna horeeyaaan arrimaha hada khilaaf ka jiro.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa shalay Garoowe ka sheegay in Puntland aan wax dan ah ugu jirin shirka madaxda Maamul Goboleedyada Soomaaliya ka qabsoomaya magaalada Kismaayo maalinta Sabtida inkastoo maanta uu shirkaas dib u dhac ku yimid ka dibmarkii ay madaxda maamulada qaar baaqdeen iyo Dowladda oo aan doonayn in shirkaas qabsoomo.
Hadalka Camey ayaa ka muuqanayey in uusan ku raacsanayn Gaas go’aankii warsaxaafadeedka wadajirka ahaa ee ay soo saareen maamul goboleedyada ee looga soo horjeeday go’aankii ay dowladda federaalka ku taageertay xildhibaanadii xilka ka qaaday Madaxweynaha Galmudug.
Dr Gaas ayaa khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Eng Camey waxay sababtay in Gaas uu ka baaqdo shirka Kismaayo iyadoo ay hareeyeen hirar kala duwan oo ka hor imaanayey Madaxweyne Gaas oo Khilaafkan ugu weyn yahay.